Dhageyso: Maxaa ka jira in mooshinkii madaxweyne Farmaajo laga tanaasulay? - Caasimada Online
Home Warar Dhageyso: Maxaa ka jira in mooshinkii madaxweyne Farmaajo laga tanaasulay?
Dhageyso: Maxaa ka jira in mooshinkii madaxweyne Farmaajo laga tanaasulay?
Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa beeniyay in laga tanasulay mooshinkii laga keenay madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Arrintan ayaa soo shaac baxday kadib kulankii axaddii ay Muqdisho ku yeesheen guddoonka baarlamanka Soomaaliya, oo la sheegay in heshiis lagu gaaray.
Xildhibaan Cabdixakiim Macallin Axmed, oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweynaha ayaa idaacadda Simba ee Muqdisho u sheegay in xal iyo tanaasul uusan jirin ,islamarkaana kulamada baarlamaanka Soomaaliya marka dib loo furo looga doodi doono mooshinka.
Sidoo kale waxa uu sheegay in kulankii u dhaxeeyay gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa looga hadlay kaliya sidii loo xallin lahaa khilaafka dhexdooda ka jira, balse aan looga hadlin arrimaha mooshinka madaxweynaha.
Hadalka xildhibaanka ayaa imaanaya xili ay soo baxeyn warar ku aadan in xal laga gaaray mooshinkii xilka ka qaadista ee laga gudbiyay madaxweynaha dalka.
Hoos ka dhageyso codka xildhibaanka